Horudhac: Liverpool vs Brighton… (Reds oo jebin karta rikoor ay sameysay in ka badan 30 sano kahor & Jurgen Klopp oo gaari kara guushiisa 200-aad ee…) – Gool FM
Horudhac: Liverpool vs Brighton… (Reds oo jebin karta rikoor ay sameysay in ka badan 30 sano kahor & Jurgen Klopp oo gaari kara guushiisa 200-aad ee…)
(Liverpool) 30 Okt 2021. Kooxda illaa iyo haatan aanan dhinaceeda dhulka la dhigin horyaalka Premier League ee Liverpool ayaa ciyaar horyaalka ka tirsan maanta la balansan naadiga kooxaha waaweyn ka yaabsaneysa xilli ciyaareedkan ee Brighton and Hove Albion.
Reds ayaa raacdo ugu jirta inay hoggaanka horyaalka qabato haddii ay u kufaan kooxaha la loomaya ee Chelsea iyo Manchester City oo iyagana isla galabta kulammadooda ciyaaraha, waxayna hal dhibic ka hooseysaa Blues oo hoggaanka kali ku ah, waxayna sidoo kale dhibic ka sarreysaa Citizens oo booska saddexaad ku jirta.
Xiddiga khadka dhexe ka ciyaara ee Fabinho, Thiago Alcantara iyo James Milner ayaa dhammaantood dhaawacyo kala duwan kaga maqnaan doona Liverpool, inta kale waa u diyaar Tababare Jurgen Klopp sida uu qudhiisa xaqiijiyayba.
Geesta kale, Brighton ayaanan galabta heli doonin difaaceeda Dan Burn, hase ahaatee, waxaa taam buuxa ah Yves Bissouma oo baddel kusoo galay kulankii EFL Cup-ka ay guuldarrada kala kulantay naadiga Leicester City kaddib dhaawac uu ka qabay jilibka kaasoo muddo bil ka badan uu ku maqnaa.
Guushii 1-0 ahayd ee ay Brighton ka gaartay Liverpool xilli ciyaareedkii hore ayaa ahayd guusheedii ugu horreysay ee ay Reds kaga qaadatay Premier League.
Kaddib markii ay ka wada adkaatay lixdii is-arag ee ugu horreysay horyaalka, Liverpool ayaa kaliya hal dhibic ka heshay Brighton xilli ciyaareedkii hore.
Liverpool ayaa guuldarro la’aan noqon karta 24 kulan oo xiriir ah dhammaan tartammada markii ugu horreysay tan iyo 1989.
Mohamed Salah ayaa ah kaliya xiddigii saddexaad ee 10 gool ka dhaliya Premier League kaddib sagaalka ciyaar ee ugu horreeya, waxaana kaga horreeyay Les Ferdinand oo sidaas sameeyay xilli ciyaareedkii 1995-96 iyo Dominic Calvert-Lewin oo fasalkii hore wacdarahaas dhigay.
Jurgen Klopp ayaa hal guul u jira inay Liverpool ku hoggaamiyo 200 oo guul dhammaan tartammada.
Brighton ayaa guul la’aan haatan ah afar kulan oo xiriiir ah horyaalka.
Dhammaan saddexda gool ee uu Alexis Mac Allister ka dhaliyay horyaalka ayaa uu shabaqa gaarsiiyay isagoo baddel kusoo galay.
Shane Duffy ayaa kulankiisii 100-aad u safan kara naadiga The Seagulls horyaalka Premier League.
Horudhac: Elche vs Real Madrid... (Kooxda yar oo guuldarro la'aan heysata iyo xiddig laf-dhabar ah oo ka maqan Los Blancos)
Horudhac: Manchester City vs Crystal Palace... (Pep Guardiola oo kulankiisii 200-aad ee Premier League hoggaamin doona Citizens iyo rikoorkiisa kulammadii hore)